March 1, 2018 – Videoviz FM
के पातली हुँदैमा स्तन पनि साना हुन्छन् ? महिलाहरुले अवश्य पढ्नुहोला
मधुमेह(सुगर) रोगीको यौन जीवन कस्तो हुन्छ ? करुणाले खोलिन् रहस्य
श्रीदेवीको अन्तिम श्रदाञ्जलि लाईभ भिडियो, शोकमा शाहरुख सलमान देखि रजनीकान्त
देशका लागि ज्यानको आहुति दिएका शहीदको सम्झनामा आज शहीद दिवस मनाइदैं ! (भिडियो पनि हेर्नुहोस)
All link post
March 1, 2018 February 28, 2018 admin
स्तन शिशुका लागि दूध बनाउनमात्र होइन, यौनका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ । स्तनको वृद्धि धेरैजसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा पूरा हुन्छ । स्तनको आकार तथा आकृतिको महिलाको मानसिकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव हुन सक्छ । स्तनसँग आत्मसम्मानको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । यसको आकार वा आकृतिका…
करुणा जी, म ५३ वर्षको पुरुष हुँ । सात वर्षयता मधुमेह रोगले पीडित छु । सुनेअनुसार मधुमेहका लक्षणहरुमध्ये एउटा लक्षण यौन शिथिलता पनि हो । ५० वर्ष पार गर्दा र मधुमेह रोगी हुँदा पनि मेरो यौनेच्छामा कमी आएको छैन । मेरी श्रीमती मभन्दा आठ वर्ष कान्छी छन् । तीन वर्षअघि उनको पाठेघरको शल्यक्रिया गरेकाले होला, उनमा यौन इच्छा शुन्यबराबर छ…
मंगलबार राती उनको पार्थिव शरीर दुबईबाट मुम्बईस्थित उनको घर ग्रीन एकर्समा लगिएको थियो । अन्तिम दर्शनका लागि श्रीदेवी आज लोखंडवालाको सेलिब्रेशन स्पोट्र्स क्लबमा राखिएको छ । अन्तिम संस्कार मध्यन्ह चार बजेको आसपासमा हुने बताइएको छ । दुई बजे उनको शवयात्रा सुरु गरिने कार्यक्रम छ । श्रीदेवीको परिवारले मिडिया, फिल्म जगत र प्रशंसकहरुका लागि प्रार्थनाको लागि केही समय छुट्याएको छ ।…
मंगलबार राती उनको पार्थिव शरीर दुबईबाट मुम्बईस्थित उनको घर ग्रीन एकर्समा लगिएको थियो । अन्तिम दर्शनका लागि श्रीदेवी आज लोखंडवालाको सेलिब्रेशन स्पोट्र्स क्लबमा राखिएको छ । अन्तिम संस्कार मध्यन्ह चार बजेको आसपासमा हुने बताइएको छ । दुई बजे उनको शवयात्रा सुरु गरिने कार्यक्रम छ । श्रीदेवीको परिवारले मिडिया, फिल्म जगत र प्रशंसकहरुका लागि प्रार्थनाको लागि […]